တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလှုပ်ရှားမှုမှမတွေ့လို့ အပြစ်တင် ဝေဖန်နေတဲ့ လူတစ်ချို့ ချက်ကျလက်ချ ပြန်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရဲရင့်အောင် – Maythadin
တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလှုပ်ရှားမှုမှမတွေ့လို့ အပြစ်တင် ဝေဖန်နေတဲ့ လူတစ်ချို့ ချက်ကျလက်ချ ပြန်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရဲရင့်အောင်
May Thadin | June 26, 2021 | Celebrity | No Comments
ပြည်သူတွေနဲ့ အတူအမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်သူများထဲတွင် အဆိုတော် ရဲရင့်အောင်လည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ဘေးကင်းရာသို့တိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့် သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားနေမှုတွေကို အပြည့်အစုံမဝေမျှနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရင်းတွေကို မသိဘဲတစ်ချို့တွေကရဲရင့်အောင်အား ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။မနေ့ညက သူ့ရဲ့ Facebook Storyမှာ တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး lဘာလှုပ်ရှားမှုမှမတွေ့လို့ အပြစ်တင်ဝေဖန်နေတဲ့လူတစ်ချို့ချက်ကျလက်ချ ပြန်ရှင်းပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အကုန်ထုတ်ပြောပြီးကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးပြမှ၊ နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို Facebookမှာ post တင်ပေးနိုင်မှ တော်လှန်တယ်လို့သတ်မှတ်နေတယ်ဆိုရင်
သူ့ကိုလည်း boycott စာရင်းထဲသာထည့်လိုက်ကြဖို့ စိတ်မကောင်းစွာ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူလုပ်သမျှအရာတွေဟာဘယ်သူမှသဘောကျကျေနပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ်လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအခုလိုရေးသားပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
” ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့ရတယ် အခုဘာတွေလုပ်နေတယ် ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုနေနေရတယ်ဆိုတာတွေကို အကုန်ထုတ်ပြောပြပြီးကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးပြမှ ၊နေ့စဉ်ဖြစ်သမျှ သတင်းတွေကိုအများနဲ့တန်းတူနားစွင့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးထဲ
သူများလာပြောပြမှသိရတဲ့ အခြေအနေမျိုးထဲနေ့တိုင်း Facebook မှာpostတွေတင်ပေးနိုင်မှတော်လှန်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ငါ့လည်း boycottစာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက်ပါတော့ကွာဆုံးရှုံးစရာလည်းကုန်သွားပါပြီ။
ငါဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ ငါပဲသိတယ်။ February (၁) ရက်နေ့မနက် (၆)နာရီကစပြီးငါလုပ်သမျှအရာတွေက lမင်းတို့သဘောကျဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ငါ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ငါပါအားတဲ့အချိန်
စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့သုံးတဲ့ Instagram ပို့စ်တွေအောက်မှာ အာလာချောင်တာတွေ ရပ်ပါတော့ငါတို့လုပ်စရာရှိတာတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေသိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်နေလို့မရဘူးလား? ” ဆိုပြီးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးကာလမှာကိုယ်လုပ်နေတဲ့တစ်ချို့အရာတွေကို လူမသိအောင် လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အပြစ်ပြောမနေကြဘဲကိုယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာကနေသာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ပြောကြားရင်းဒီသတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ျပည္သူေတြနဲ႕အတူအမွန္တရားဘက္ကရပ္တည္သူမ်ားထဲတြင္ အဆိုေတာ္ ရဲရင့္ေအာင္လည္းအပါအဝင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေန႕စဥ္ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
လတ္တေလာမွာေတာ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဘးကင္းရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ေနရတာေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕လႈပ္ရွားေနမႈေတြကိုအျပည့္အစုံမေဝမွ်နိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းအရင္းေတြကို မသိဘဲတစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ရဲရင့္ေအာင္အား ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကတာေတြရွိပါတယ္။ မေန႕ညကသူ႕ရဲ႕ Facebook Storyမွာ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘာလႈပ္ရွားမႈမွမေတြ႕လို႔အျပစ္တင္ ေဝဖန္ေနတဲ့ လူတစ္ခ်ိဳ႕ခ်က္က်လက္ခ် ျပန္ရွင္းျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူကေတာ့ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုေနခဲ့ရတယ္ဆိုတာ အကုန္ထုတ္ေျပာၿပီး ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးျပမွ၊ ေန႕စဥ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို Facebook မွာ post တင္ေပးနိုင္မွ ေတာ္လွန္တယ္လို႔သတ္မွတ္ေနတယ္ဆိုရင္
သူ႕ကိုလည္း boycott စာရင္းထဲသာ ထည့္လိုက္ၾကဖို႔ စိတ္မေကာင္းစြာ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။သူလုပ္သမွ်အရာေတြဟာ ဘယ္သူမွသေဘာက် ေက်နပ္ဖို႔မဟုတ္ဘဲကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႕ ကိုယ္ လုပ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အခုလို ေရးသားေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
” ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ ဘယ္လိုေတြ လုပ္ခဲ့ရတယ္ အခုဘာေတြလုပ္ေနတယ္ ဘယ္ေနရာမွာဘယ္လိုေနေနရတယ္ဆိုတာေတြကို အကုန္ထုတ္ေျပာျပၿပီးကိုယ့္ေသတြင္းကိုယ္တူးျပမွ ၊ ေန႕စဥ္ျဖစ္သမွ် သတင္းေတြကို အမ်ားနဲ႕တန္းတူ နားစြင့္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးထဲ
သူမ်ားလာေျပာျပမွ သိရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးထဲ ေန႕တိုင္း Facebook မွာpost ေတြတင္ေပးနိုင္မွ ေတာ္လွန္ေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ငါ့လည္းboycottစာရင္းထဲသာ ထည့္လိုက္ပါေတာ့ကြာဆုံးရႈံးစရာလည္းကုန္သြားပါၿပီ။
ငါဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုတာငါပဲသိတယ္။ February (၁) ရက္ေန႕မနက္ (၆)နာရီကစၿပီးငါလုပ္သမွ်အရာေတြက မင္းတို႔သေဘာက်ဖိဳ႕အတြက္မဟုတ္ဘူး။
ငါ့ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႕ငါပါအားတဲ့အခ်ိန္ စိတ္ထြက္ေပါက္အေနနဲ႕ သုံးတဲ့ Instagram ပို႔စ္ေတြေအာက္မွာ အာလာေခ်ာင္တာေတြ ရပ္ပါေတာ့ငါတို႔လုပ္စရာရွိတာေတြကို တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေန သိုသိုသိပ္သိပ္လုပ္ေနလို႔ မရဘူးလား? ”ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာကိုယ္လုပ္ေနတဲ့တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြကို လူမသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ိဳးေတြရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို
အျပစ္ေျပာမေနၾကဘဲကိုယ္ပါဝင္နိုင္တဲ့ ေနရာကေနသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကဖို႔ ေျပာၾကားရင္း ဒီသတင္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္။
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ Review ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့မိလို့ အရှက်တွေဗြန်းဗြန်းကွဲခဲ့ရတဲ့ နေခြည်ဦး
အရင်က စစ်တပ်မှ စစ်တပ် ဖြစ်ပြီး အခု မှ ” လစာ တစ်ပြား မှ မရပဲ ပြည်သူတွေ အတွက် အသက်ပေးနိုင်တာ ဆိုလို့ PDF တွေပဲ ရှိတယ် ” လို့ ပြောလာပြန်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်.,………………..
အဆိုတော် မေနာ၊ ညီမင်းခိုင်နဲ့ ဝေကြီးတို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဂီတအစည်းအရုံးမှနှုတ်ထွက်
မိခင်ဖြစ်သူ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားတာကြောင့် ဖြေဆည်မရအောင် ဝမ်းနည်းခံစားနေရရှာတဲ့ တင်ဇာမော်